Best Bathtub Rain Shower Foset Systems
Home / Foset Guide / Best Bathtub Rain Shower Foset Systems
2020 / 10 / 09 nhazi ọkwaFoset Guide 1762 0
Ọ nwere ihe na-enye ume ọhụrụ karịa ịkwa ahụ? N'ezie, ọ bụrụ na sistemụ ịsa ahụ ịsa ahụ anaghị arụ ọrụ nke ọma, ị gaghị enweta ihe ị zụrụ maka ya. Ọ dịghị onye chọrọ ịgbalịsi ike mgbe niile na nrụgide mmiri dị ala, akụkụ ihu igwe na-adịghị mma, njikwa ọnọdụ adịghị mma, ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ sitere na ọkpọ mmiri mmiri na-adịghị mma.
Nnukwu ọkpọkọ mmiri ịsa ahụ bụ ihe ị ga-anụ ụtọ kwa ụbọchị maka afọ ndị na-abịa, yabụ na ọ bara uru itinye ego na ezigbo mma. Ihe ọ bụla mmefu ego gị nwere ike ịbụ, enwere nhọrọ maka gị n’etiti sistemụ ịsa ahụ kachasị mma nke 2020.
Nnukwu Nke Elu:
Delta foset 4-raygba Touch Clean In2ition
Ọ bụ ihe ijuanya na usoro ọkpọkọ Delta bịara na elu ndepụta? Ihe atumatu abuo a na - enye gi ohere inwe obi uto n’elu ya na ihe ntanetiri gi n’otu oge. Ejiri nhọrọ iji hazie ahụmịhe ịsa ahụ gị, mana ha niile na ọnụahịa na-enye gị ọnụahịa kachasị elu maka ego gị. Ọ naghị enweta ya karịa nke ahụ.
1. Delta foset 4-raygba Touch Clean In2ition
Delta bụ eze na ụwa mmiri ọkụ, yana ezi ihe kpatara ya. Ha 4-raygba Touch Clean In2ition bụ ezigbo nguzozi nke ndị ọkachamara na mmebe.
Ihe Mere Anyị Ji Hụ Ya n'Anya:
Ọtụtụ igwe mmiri na-asa ahụ nwere hoses nke na-ahapụ gị ka ị wụsa n'etiti ihe na-efe efe n'elu na ihe eji eji aka. Nke a bụ otu n’ime ihe ole na ole ga - enyere gị aka ime ha abụọ, yana mgbaaka dị n’elu na ihe na - apụ apụ.
Spzọ Spgba anọ
Aha usoro sistemụ a abụghị ihe omimi n'ihi na ọ na-abịa na nhọrọ ịgba egwu anọ dị mfe: ịhịa aka n'ahụ, ịgba ahụ zuru ezu, nchikota nke ahụ zuru oke na ịhịa aka n'ahụ, na ịkwụsịtụ.
Igwe mmiri ịsa ahụ a na-eji Delta Faucet's chepụtara ihe eji agba agba, nke ga - enyere gị aka ihicha ha niile ọbụlagodi na inwere mmiri siri ike na ọgwụ ndị ọzọ na mmiri gị.
2. SR Anyanwu Ruwa Shower System
Igwe mmiri ịsa ahụ bụ ịla ezumike nká ụbọchị nsogbu gị, yabụ gịnị ma ị mee ya ezigbo olulu mmiri? Na SR Sun RISE usoro mmiri ozuzo na-eme ka mmiri ọ bụla saa ahụ ghọọ ahụmịhe mara mma
Dị mmiri ozuzo
Igwe mmiri ozuzo nke ụdị mmiri ozuzo na-akwụ ụgwọ kpọmkwem ma gosipụta mmiri sara mbara karịa obere iyi. Uniquedị ahụ pụrụ iche zuru oke iji mee ka onye ọ bụla chee na ha na-ekpori mmiri na-ekpo ọkụ n'oge ọkọchị.
Direct-raygba Handheld Sprayer
Mgbe ị na-eji ọtụtụ ihe ọkpọ mmiri sistemụ mmiri, mmiri anaghị enwe ike dị ukwuu na ya, ọ na-aga n'akụkụ ihu ala. Nke a na - eme ka o sie ike ịchọta ịgba gị ebe ịchọrọ. Ihe nlereanya SR SUN RISE a na-awụgharị n'ahịrị ziri ezi ka ị nwee ike izi ezi.
Ileghara Anya Modern
Usoro mmiri ịsa ahụ a dị mma maka ụlọ ọ bụla nke oge a. Site na akụkụ ya ndị mara mma, ahịrị dị ọcha, na ọtụtụ usoro nke ịmecha nhọrọ, ọ na-akwado ụlọ ịsa ahụ nke oge a nwere atụmatụ agba ọ bụla.
3. Delta foset Linden 17 Usoro
Onwere onye juru Delta Foset rute ala abuo foset usoro n’etiti ebe atọ kacha elu na ndepụta anyị? Aha ha a tụkwasịrị obi, impepe adịghị mma, na ihe ndị ọhụrụ na-eme ka ha bụrụ ikike.
Tub na ịsa ahụ Combo
Nke a foset usoro-abịa na ọ bụghị nanị na a na-asa ahụ na kemwepu spray wand ma a tub foset kwa. Ọ niile ụzọ abụọ enweghị nkebi maka a okomoko n'ezie, ịdabere na usoro. Otú ọ dị, enwere nhọrọ ịsa ahụ naanị ma ọ bụrụ na ị hụrụ ụdị ahụ n'anya mana ị nwere mmiri na-adịghị ọcha.
Pụrụ Iche Imecha Nhọrọ
Igwe mmiri ịsa ahụ gị bụ nnukwu akụkụ nke ụlọ ịsa ahụ gị, yabụ emebila usoro nwere otu ma ọ bụ abụọ. Nke a Delta foset usoro abịa na chrome, igwe anaghị, champeenu ọla kọpa, na Venetian ọla kọpa.
On top of the cosmetic components, Delta Faucet's kit comes with their high-quality valve as well, na ị nwere ike nweta usoro ma ọ bụ na-enweghị ike ike. Get nweta ihe niile ịchọrọ iji wụnye sistemụ gị wee malite ịnụ ụtọ ya.
A maara Moen maka ịkwado ọrụ ha na ịme ngwaahịa na-adịgide adịgide, na nke a T2909EPBN usoro ịsa ahụ adighi-emechu ihu. Ọ na-elekwasị anya na otu ihe na otu ihe naanị: mma ewu.
Nhazi nke Minimalist
Mgbe ụfọdụ, obere na-adị karịa, nke ahụ bụ nkà ihe ọmụma Moen ejiri usoro ịsa ahụ a. Ọ bụ ụlọ ịsa ahụ dị mfe na-enweghị ihe mkpuchi maka mmiri na njikwa ọnọdụ okpomọkụ. O nwere ihe niile ịchọrọ ma ọ nweghị ihe ọ bụla ị chọghị.
Ogologo Ogologo Ogologo
N'adịghị ka ọtụtụ sistemụ mmiri ịsa ahụ na ndepụta a, sistemụ Moen na-abịa na mbinye aka ha pere mpe nke ndụ. Nwere ike izu ike dị mfe na ọkpọkọ mmiri gị ga-adịgide wee teta n'ụtụtụ n'ụtụtụ nnukwu mmiri.
Mfe maka Nwelite Ọdịnihu
Moen na-eji usoro M-PACT valve niile akara ha nke usoro ọkpọkọ ịsa ahụ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ụdị gị agbanwee mgbe emesịrị ma ọ bụ oge maka nwelite, ị gaghị agbanweta plọpị ma ọ bụrụ na ị zụta usoro Moen ọhụrụ.
5. American Standard 9038804.295 Spectra Versa Usoro
The Standardkpụrụ American 9038804.295 bụ nkwupụta mmiri ozuzo nkwupụta ma ọ bụrụ na anyị ahụla otu. N'etiti etiti mmiri ozuzo, ihe mgbakwunye aka, ogologo eriri, yana akara njikwa, ịsa ahụ gị ghọrọ ebe dị egwu.
Rainfall Shower without nwụnye Isi ọwụwa
Mmiri mmiri ozuzo bụ nkọwa nke okomoko, mana ha na-enwekarị nsogbu: nrụnye siri ike na ụlọ elu mmiri. American Standard, n’aka nke ọzọ, na-eme ka ọ dị mfe site n’inye gị mmiri ozuzo mmiri ozuzo nke etinyere site na mgbidi dị nfe dịka usoro ọkpọkọ mmiri ọ bụla ọzọ.
Otutu Nhọrọ Ike
Imirikiti sistemụ ọkpọ mmiri nwere otu ikike ikike mmiri (edepụtara dị ka galọn kwa nkeji ma ọ bụ GPM) ma ị nweta ihe ị nwetara. American Standard na-enye usoro a pụrụ iche na nhọrọ abụọ, 1.8 GPM ma ọ bụ 2.5 GPM, yabụ ị nwere ike ịhọrọ ahụmịhe ịchọrọ.
Ogologo ogologo maka ịsa aka
Standardkpụrụ American Spectra Versa na-egosi eriri nke anụ ọhịa 69 maka aka mgbakwunye ịsa ahụ, nke dị ogologo karịa ka anyị na-ahụkarị. Nke ahụ na-enye gị mgbanwe kachasị maka ịsa ntutu gị, ịsa nkịta ahụ, hichaa saa ahụ, ma ọ bụ mkpa ọ bụla ị nwere ike ịnwe.
6. peerless Claymore foset Kpaa Kit
Dị Mfe ma na-adịghị agafe agafe, Ọgbọ na Claymore Foset Kpaa Kit Ezubere maka tub na ịsa ahụ n'otu. Ọ bụ ebe a na-enweta ohere ma mara mma na ụlọ ịsa ahụ ọ bụla.
Uche Ejiji Pụrụ Iche
A na-enweta ọla kọpa na-ete mmanụ dị ka nhọrọ na-ewu ewu maka ime ụlọ ịwụ, na Peerless maara. Ọdịdị nkecha jikọtara ya na ngwungwu atọ dị nro nke sistemụ ọkpọkọ a na-emeju anya gị n'emeghị ya ike.
Nke a Peerless foset usoro ji nganga na-ebu WaterSense akara. Nke ahụ pụtara na ọ na-enye gị ụlọ ịsa ahụ na-enye ume ọhụrụ ma na-ebelata mkpofu mmiri site na 20%. Ọ bụghị naanị na nke a bụ onyinye maka gburugburu ebe obibi, mana ọ na-echekwa gị ego na ụgwọ mmiri gị.
Ezi uche Showerhead Design
Igwe isi mmiri nke jupụtara na olulu abụghị ihe kachasị mma n'ụwa, ọ bụ ya mere Peerless ji jide n'aka na nke ahụ abụghị ihe mbụ ị hụrụ n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ. Dị ịsa ahụ pụrụ iche na-ekpuchi oghere ndị nwere oghere dị obosara.
7. KES Pressure guzozie Rain ịsa System
Fọdụ ndị hụrụ ezumike nke mmiri ozuzo n'anya ebe ndị ọzọ na-ahọrọ ihe nwere nrụgide mmiri karị. Na KES mgbali edozi usoro mmiri ozuzo nwere ụwa kachasị mma: mmiri ozuzo mmiri ozuzo nke nwere ihe eji aka aka na-arụ ọrụ nke ọma.
Nrụgide Nrụgide Nrụgide
Anyị niile enweela oge mgbe anyị batara n'ime mmiri ịsa ahụ anyị ụra ọkara ụra na oke nrụgide kpaliri anyị ịmụrụ anya. Ọ bụrụ n'ịhọrọ ahụmịhe na-erughị ala, ị ga-ahụ n'anya valvụ na-enweghị nsogbu.
Ọtụtụ sistemụ ọkpọ mmiri nwere otu sooks ma ọ bụrụ na ha nwere eriri mmiri ọ bụla. KES niile bụ maka ịhazigharị ihe, agbanyeghị, yabụ na ha na-enye eriri mgbatị nwere ike iru n'etiti 59 na 75 sentimita asatọ.
Nkeji Nke Ọzọ
Nwere ike ịchọpụta na sistemụ ọkpọ mmiri a nwere ọdịdị yiri nke SR SUN RISE system anyị họọrọ na # 2. Anya dị yiri ma enwere esemokwu ole na ole: sistemu KES nwere nhọrọ dị iche iche gwụchara ma ọ na-abịa na ntakịrị ọnụahịa ọnụahịa.
8. Moen Genta Posi-Temp tub na ịsa ahụ Kpaa
Moen bụ nna ukwu nke ụdị dị mfe ma mara mma nke nwere ogo dịgidere. Ha Genta Posi-Temp tub na ịsa ahụ awade zuru okè itule nke aesthetics na ọrụ na anyị na-na na-atụ anya n'aka ika.
Styledị Pụrụ Iche
Igwe mmiri ịsa ahụ Moen a nwere ụdị nke ya niile. Ogwe njikwa nwere ngwakọta nke usoro ọdịnala na ahịrị ndị a na-eme ugbu a, ebe isi mmiri na-agbawa akara n'etiti oke mmiri ozuzo-dị ka ịsa ahụ na ọdịnala, warara nke warara.
Ọ nwere ihe dị njọ karịa ịchọta sistemụ ịsa ahụ ị hụrụ n'anya mana ịchọpụta na ọ nwere naanị ụlọ ịsa ahụ ma ugbu a ịchọrọ tub ị ga-adaba? Ihe nlere Moen a na - abia ma mmiri na - agba mmiri na - asa ahụ ka ọ ga - adị mma n’anya.
Ọkpụkpụ dị warara nwere ike ịdị mma n'anya n'ụgbọ mmiri ụfọdụ, mana maka onye nwere ogbu na nkwonkwo, mmerụ aka, ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ, ha abụghị naanị ihe mgbu. Ihe nlere Moen a na - egosipụta oke aka na - eme ka ọ dịrị onye ọ bụla mfe iji.
9. Grohe Europlus Zuru okè ịsa Set
The Grohe Europlus Zuru okè ịsa Set bụ ihe mara mma na mgbakwunye na ime ụlọ ịwụ ọ bụla nke nwere Chrome. Understdị ya dị n'okpuru na-enye gị ọrụ niile ịchọrọ na-enweghị ịchụ àjà ụdị.
Oge a Dị Mma
Wantsnye chọrọ ịhọrọ n'etiti ọdịnala ọdịnala na obi ike, ọmarịcha ọgbara ọhụrụ? Gini na emeghi ka nkewa di iche dika eke di ugbua? Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Grohe a na-asa mmiri na-eme na kichin ha chrome.
Ike nke Tempesta
Nchịkọta Tempesta bụ ihe kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-agba Grohe, yana ụdị ya mara mma na ogo dị elu. Usoro a na - agwakọta igwe mmiri ozuzo na onye na - agba mmiri site na nchịkọta Tempesta n'ime otu luxe.
Igwe mmiri a na-agbanye mmiri galọn 1.75 kwa nkeji, nke dị ala karịa ọtụtụ nhọrọ na ahịa taa. Nke ahụ pụtara na ị ga - echebe mmiri nke mbara ụwa ka ị na - achọ ịsa ahụ nrọ gị.
10. Grohe Grohtherm Smart Thermostatic Kpaa Na Modul Njikwa
Akwa ịsa ahụ abụghị naanị ihe ịchọrọ maka igwe mmiri mara mma. Ikwesiri ijikwa isi mmiri dị iche iche, okpomọkụ, ogo nrụgide na ndị ọzọ. Na Grohe Grohtherm Smart thermostat na-etinye njikwa ahụ n'aka gị.
Họrọ Ntọala Gị
Customizability bụ aha egwuregwu na njikwa njikwa a, ị nwere ike ịhazi ọnụọgụ njikwa ị nwere. Họrọ bọtịnụ otu, abụọ, ma ọ bụ atọ ma kpebie akara ndị ịchọrọ maka nke ọ bụla dabere na ihe ịchọrọ ka ọ chịkwaa
Undba ụba nke Mmecha Nhọrọ
N'ihi na usoro njikwa a na-abịa iche iche, ọ ga-adakọrịrị eriri ọkpọkọ mmiri ọ bụla. Na-ahọrọ gị n'etiti isii gụchara nhọrọ si starlight chrome ka ike graphite.
Ihe Nghota di mfe ighota
Ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka, ịchọghị ka ị na-azụ ha etu esi achịkwa ịsa ahụ kwa ụbọchị, mana nke ahụ bụ ihe na-eme na ụfọdụ njikwa njikwa dị mgbagwoju anya. Nke ahụ agaghị adị na akara ngosi doro anya na njikwa njikwa a.
11. Moen Smart Home Jikọrọ Dijitalụ Igwe Na-asa Ahụ
Dị ka Grohe akara panel, nke a Moen smart home digital ụlọ ịwụ njikwa bụ ụzọ iji chịkwaa ịsa ahụ gị karịa isi igwe ịsa ahụ n'ezie. Ọ bụ teknụzụ dị elu nke na-eme ka mmiri gị ngwa ngwa, dị mfe, ma kwekọọ maka mkpa gị.
Ebe a na-agbanwe agbanwe
Mgbe ụfọdụ obere nsogbu na ndụ na-akpasu gị iwe, dị ka ịnweta mmiri oyi n'isi gị mgbe mbụ ị banyere iji gbanye mmiri ịsa ahụ. Can nwere ike idowe Moen akara panel nke ahịrị ọkụ ka ị ghara ịmwụ mmiri ruo mgbe mmiri ruru ogo zuru oke.
Nhọrọ Iche Iche
N'ụtụtụ ụtụtụ oyi, ị gaghị enwe mmasị isi na akwa ụra gị ogologo gaa saa ahụ ọkụ? Ihe nchịkwa a na - ahapụ gị ka ị mee nke ahụ n'ihi na ị nwere ike ijikwa ịsa ahụ gị na ekwentị gị ma ọ bụ onye na - enyere gị aka olu dị ka Alexa ma ọ bụ Google Home ka ọ banye na ezigbo ọnọdụ okpomọkụ tupu ị bilie.
Akụkụ Na-echekwa Mmiri
Onye njikwa Moen na-enye atụmatụ nchekwa mmiri dị ka oge nke na-enye gị ohere ịkwụsị oge ịsa ahụ. Ọ zuru oke maka ezinụlọ nwere ụmụaka na-efunahụ oge na onye ọ bụla chọrọ ịhapụ ụtụtụ na-agagharị.
Họrọ usoro ntanetị kacha mma nke 2020
Igwe mmiri ịsa ahụ gị bụ ohere iji zuru ike na izu ike, ma ọ bụ na mbido ma ọ bụ na njedebe nke ụbọchị ọrụ gị. Nye ya ntụle tosiri ya na nke ọ bụla n’ime nhọrọ ndị a maka sistemụ ọkpọ ịsa ahụ kachasị mma na 2020. Maka nhọrọ ndị ọzọ dị elu maka ngwaike ụlọ gị, lelee karịa blọọgụ ịzụ ahịa anyị.
Nke gara aga :: Top 10 Kachasị Myọcha fosets 2020 Osote: Isi mmiri kachasị mma maka 2020
Ayszọ ndị na - eduga n'ịhọrọ kichin kachasị mma
Kwụpụ site Ntuziaka Nzọụkwụ na Ndozi na Otu Esi Zụta Ego Ntanetị N'ịntanetị
Etu ị ga-esi họrọ igwe mmiri kwesịrị ekwesị
Etu ị ga - esi ahota ezi mmiri maka bekee gị
Kacha mma foset na-eduzi
2020 / 11 / 16 501
Etu esi azuta ngwa nri ohuru